एफपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको नयाँ सारथी लघुवित्तको वित्तीय अवस्था : | आर्थिक अभियान
मंसिर २०, काठमाडौं । नयाँ सारथी लघुवित्त वित्तीय संस्था एफपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा रहेको छ ।
कम्पनीले ३ लाख २९ हजार ६४९ कित्ता एफपीओ प्रतिकित्ता रू. ११६ मा निष्कासन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । एफपीओ निष्कासन गर्नका लागि कम्पनीले नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डमा भदौ ९ गते निवेदन दिएको छ । विक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती पाएपछि मात्र एफपीओ निष्कासन गर्नेछ ।
कम्पनीले चालू आवको पहिलो त्रैमाससम्ममा रू. ६५ लाख ५० हजार नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा २ दशमलव ९ प्रतिशत घटेको हो । गत आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले रू. ६७ लाख ४८ हजार नाफा कमाएको थियो ।
त्यसैगरी कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा ९ दशमलव ४५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ ।
त्यस्तै कम्पनीको सञ्चालन नाफा गत आवको पहिलो त्रैमासमा रू. २८ करोड २६ लाख ऋणात्मक रहेकोमा चालू आवको सोही अवधिमा रू. १ करोड ९ लाख धनात्मक भएको हो ।
कम्पनीको चुक्तापूँजी रू.२५ करोड ४९ लाख ५४ हजार रहेको छ भने जगेडामा रू. २३ करोड ७७ लाख सञ्चित रहेको छ ।
कम्पनीले चालू आवको पहिलो त्रैमाससम्ममा कम्पनीले रू. २ अर्ब ७० करोड ७० लाख सापटि लिएर,रू. ८६ करोड ९३ लाख ७३ हजार निक्षेप संकलन गरेर रू. ३ अर्ब ८८ करोड ४७ लाख ३९ हजार कर्जा लगानी गरेको हो । त्यसैगरी कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू.१० दशमलव २८.वार्षिकिकरण, तरलता अनुपात ५ दशमलव ३३ प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १९३ दशमलव २७ रहेको छ ।